Didim-poitra etsy sy eroa Tsy misy iainana ny « bal » isan-kalina
Velon-taraina ny sasany amin’ireo olona monina eny amin’ny faritra iva amin’izao. Saika ho isan-kalina mantsy hatramin’ny vanim-potoana niantombohan’ny ririnina dia mafotaka hatrany ny alim-pandihizana izay ohatra mitety
tokantrano mihitsy. Ireo mpanao famoran-jazalahy no tena mankafy azy io izay marihina fa mbola mandihy sy mameno ny arabe ihany koa amin’ny andro atoandro. Ho an’iny faritra 67 ha misy ny lalam-baovao iny ohatra dia mahatratra 5 isan’andro raha kely ireo olona manao didim-poitra mandihy sy mitsinjaka eny an-toerana izay zary lasa hafinaretan’ny mpitazana indray ny mahita azy. Ny manahirana amin’ny tranga tahaka itony dia ny fanelingelenany ny fiaraha-monina indrindra raha misy fifandirana eny an-dalana sy mandritra ilay alim-pandihizana. Toraka izany koa ny fitohanan’ny fifamoivoizana izay haterak’izy ireny amin’ny fotoana hodian’ny mpianatra sy ny mpiasa. Tsiahivina moa fa tsy mba afaka nanao izany izy ireny tamin-taon-dasa noho ny fihibohana nateraky ny valan’aretina Covid 19 hany ka tena manararaotra tanteraka.
Andranoalike - Androy Iharan’ny fanaparam-pahefana ireo tompon’omby
“Vonjeo izahay mponina aty Andranolalike Kaominina Andalatanosy any Ambovombe Androy fa anjakazakan’ny solontenam-panjakana sy ny mpiray dina ny omby”, hoy ny antso vonjy.
Fiainam-pirenena Tsy misy fampandrosoana vanona raha tsy voafehy ny rano
Sehatra mampikolay ny vahoakan’Antananarivo sy ny manodidina ny tsy fisiana sy tsy fahampian-drano.
Vontovorona Nanao fanadiovana faobe ny teny amin’ny Polyteknika
Betsaka ireo zava-manahirana ireo mpianatra manovo fahalalana eny amin’ny politeky Vontovorona amin’izao. Ankoatra ny tsy fisian’ny rano,
Tontolo ambanivohitra Mamelona tokantrano ny 90% n’ny vehivavy
Maherin’ny 80%n’ireo vehivavy misehatra amin’ny asa mbola tsy tafiditra anaty sehatry ny ara-dalana na ilay antsoina hoe “secteur informel”
Fanondranana olona an-tsokosoko Ankizivavy miisa 8 indray no saika nalefa tany Dubai
Tambazotra mahery vaika mpanondrana olona hiasa antsokosoko mankany Dubai no ravan’ny polisim-pirenena tamin’iny volana novambra nivalona teo iny.